बेचिन पुगेकी चेली उद्दारको कथामा ‘आफ्नोपन’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
विराटनगर, ३ मंसिर । लोकदोहोरी गीत ‘आफ्नोपन’ सार्वजनिक भएको छ ।
विभिन्न प्रलोभनमा परेर बेचिन पुगेकी चेली उद्दारपछि घर फर्किएको कथामा बनेको गीत ‘आफ्नोपन’लाई डा. शिव सुवेदीको युट्युव च्यानलमार्फत् सार्वजनिक गरिएको हो । युवराज आचार्य र सुनिता बुढा क्षेत्रीको स्वर रहेको गीतमा नारायण कँडेलको शब्द रहेको छ भने डा. शिव सुवेदीले संगीत भरेका हुन् ।
भिडियोमा सनम कठायत र रोशनी कार्कीको अभिनय रहेको छ । सार्वजनिक गरिएको गीतको भिडियोमा बेचिएकी चेली फिर्ता ल्याउन एक प्रेमीले गरेको संघर्ष देखाइएको छ । विनोद भण्डारीको निर्देशनमा तयार भएको म्युजिक भिडियोलाई करण चैसिरले छायांकन गरेका छन् भने भिडियोलाई विकास ज्ञवालीले सम्पादन गरेका हुन् ।